Shulman Rogers oo is hor istaagtay in Hantidii Somalia la Dhaco – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 5 October 2014 6 October 2014
Mareeg.com-Shirkadii Lawyerada Shulman Rogers oo u jawaabtay shirkad Qareeno kale oo si qaas ah u shaqaaleeyay Bashir Issa iyada oo iftiimisay in Shulman La weydiisatay lacago tiro badan si loo cusboonaysiiyo Contracts iyaga oo arrintaas ka hor yimid sababa la xiriiro in dawlada Maraykanka ay arrintaas ka tahay dembi aad u weyn oo loogu yeero foreign corrupt practice Act.
Waxay si dadban u sheegeen in Bashir Isse iyo wiil uu dhalay oo degan Maraykanka ay dhawr jeer isku dayeen inay lacaga tira badan ka qaataan arrinkaa uu gadaal ka riixayay Wasiirka Maaliyada Xalane, intaas ka dib markii ay Shulman diiday inay bixiso lacagtii la weydiiyay ayaa Central Bank Wuxuu shaqaaleeyay shirkada kale oo lawyers ah degan Washington Kobre & Kim LLP si loogu qasbo Shulman Rogers inay bixiso master list iyo meel walba oo og yihiin ee dunida dacaleeheeda oo ay Somalia lacag u taalo si masuuliyiintaas ay u boobaan hantidaas ummada Somaaliyeed ay leedahay iyada oo la adeegsanayo shirkada cusub xafiiskeeda London waayo CID ogaan karta ma jirto inta ay la eg tahay hantidaas soo xarootay
Haddii ay isticmaalaan shirkad sida Shulman oo kala ah waxay ku qasban yihiin inay sheegaan waxa soo xarooday oo idil oo ay la socodsiiyaan dawlada Maraykanka.
Arrinta ugu weyn ay Sameeyeen Bashir Issa ,Xalane iyo nin ka shaqeeya Xafiiska Madaxweynaha oo la yiraahdo Aweys ayaa ah waxay heshiis hoose la galeen raq qowlaysata ah oo la shaqeeya World Bank iyo IMF oo loo balan qaaday lacag aad u tira badan si ay dawlada ugu dhaadhiciyaan in lawyers cusub loogu wareejiyo Shaqada soo celinta Hantida qaranka. Shaqadan waxaa loo wakiishay Gabar la yiraahdo Hodan oo u shaqeysa Bashiir Issa iyo nin la yiraahdo Cabdulahi Carays oo u shaqeeya Xalane, iyaga oo la doonayo haddii ay wax ceeb ah ka timaado iyaga dusha laga saaro.
Arrimahaas oo ay si xawli u socdo oo ay masuuliyiintaas doonayaan in ay maxkamad la aadan Shulman ayaa haddii ay fashilanto waxay sababi doontaa in masauuliyiintaas Shaqada ay ku waayaan amaba iyaga shaqsiyan la maxkamadeeyo.
Bashiir Isse , Xalane iyo Aweys oo horey u soo lunsaday hanti badan oo ay leedahay ummada Somaaliyeed dawladihii hore ay doonaya inay mar labaad wax boobaan.
Bashir Isse oo hada ku sugan New York ayaa doonaya inuu la soo baxo Dahabkii iyo lacagtii taalay New York Federal Reserve, aarintaas oo fadeexad weyn u soo jiidi doonta Dawlada Somalia maxaa yeelay Dahabkaas wuxuu yiilay laga soo bilaabo 1960.
Waxaan ilaahay ka rajeynaynaa in Somalia ay hesho Hogaamiyayaal daacad u ah dalkooda oo aanan ahayn kuwa maanta jooga.